Ciidamada Jabuuti iyo Maleeshiyaadka 'Hirshabelle' oo Jalalaqsi ku dagaallamay.
Faah Faahin: dagaallo Tobaneeyo Askari lagu dilay oo ka dhacay duleedka degmada Xudur.
Sunday October 06, 2019 - 19:26:40 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya iska hor'imaad xooggan oo gudaha gobolka Hiiraan ku dhaxmaray ciidamada Jabuuti iyo maleeshiyaad katirsan maamulka Hirshabelle.
Wararka ka imaanaya Hiiraan ayaa sheegaya in gudaha degmada Jalalaqsi ay ku dagaallameen ciidamada Jabuuti ee qeybta ka ah soo duulayaasha AMISOM iyo maleeshiyaad daacad u ah maamulka isku magacaabay Hirshabelle.
Iska hor'imaadka oo ka dhacay dacalka bari ee magaalada ayaa sababay khasaara dhaawacyo ubadan oo dhinacyada kala gaaray, dad goob joogayaal ah ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada Jabuuti ay isagoo baxeen Bariga magaalada ayna uwareegeen dhanka galbeed.
Maxamed Nuur cagajoof oo ku magacaabay guddoomiyaha Jalalaqsi ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in iska hor'imaad xooggan oo dhaxmaray ciidamada Jabuuti iyo maleeshiyaadkoda balse wuxuu ku andacooday in khilaafkaas laxaliyay.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in khilaafka labada dhinac dhaxmaray uu salka ku hayo lacago canshuura ah oo Jabuutiyaanku ay suuqa Jalalaqsi ka qaadi jireen iyo amar kasoo baxay saraakiisha Jabuuti oo lagu dambin laha shirkadaha isgaarsiinta degmada oo uu ka biya diiday maamulka degmada Jalalaqsi ugu magacaaban Hirshabelle.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in maanta gelinkii dambe ay iskusoo baxyo ka dhan ah ciidamada Jabuuti ay ka dhaceen Bariga Jalaalqsi waxaana la arkayay dad shacab ah oo taayarro ku gubaya waddooyinka magaalada.